Nagarik Shukrabar - बदलिँदो तिज : श्रीमतीको नाममा व्रत
बुधबार, २७ भदौ २०७५, ०४ : ३६ | पुष्पा थपलिया
श्रीमान्को आयु बढाउन तिजमा कति महिला मात्रै व्रत बस्ने ? श्रीमतीको आयु बढाउन श्रीमान् पनि व्रत बसे हुन्न र ?
तिजमा पुरुषले पनि व्रत बसे हुन्न र ? भनी प्रश्न गर्न थालिएको र बहस सुरु भएको एकाध वर्ष भयो । कतिले सह–अस्तित्वको सवाल उठाउँदै त कतिले सहप्रेमलाई जोडेर महिला मात्रै किन व्रत बस्ने भन्ने सवाल उठाइरहेका छन् । तिजमा पुरुष व्रत बस्नै हुन्न त ?
संस्कृतिविद्का अनुसार तिजमा पुरुष व्रत बस्नुपर्ने भनी कुनै शास्त्रमा उल्लेख छैन । शिवलाई श्रीमान्को रुपमा पाउन पार्वतीले व्रत बस्दा मनोकामना पूरा भएको धार्मिक मान्यताका आधारमा महिलाले जीवनसाथीको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै व्रत बस्ने गरेको देखिन्छ ।
‘जताततै महिलाको मात्रै कुरा आयो, महिलाले पुरुषलाई पाउन व्रत बसेका कथा सर्वव्यापी भएकाले महिलाले मात्रै व्रत बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी आफैँले बसाल्यौं,’ संस्कृतिविद् विणा पौडेलले भनिन्, ‘शास्त्रमा पुरुषले तिजको व्रत बस्नु हुँदैन भनेर लेखेको छैन ।’
दोलखाका विक्रम सिग्देल काठमाडौंमा बस्छन् । उनी सानैदेखि धार्मिक वातावरणमा हुर्किए । प्रारम्भिक शिक्षाबाहेक नेपालको स्कुलमा पढ्न पाएनन् । बाबुले सानो उमेरमा भारतको बनारसमा संस्कृत पढ्न पठाए । पढाइ सकेर नेपाल फर्किएका उनी अहिले पुरेत्याईँ गर्छन् ।
‘भगवान्ले मेरो कामना पूरा गरिदिए, मेरो व्रत सफल भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रत्येक तिजमा शिवपार्वतीलाई धन्यवाद दिन र कविताको सुस्वास्थ्यका लागि व्रत बस्ने गरेको छु ।’
काठमाडौं ट्यांग्लाफाँट निवासी सन्तोष, प्रत्येक तिजमा श्रीमतीको सु–स्वास्थ्यको कामना गर्दै व्रत बस्छन् तर उनी व्रत बसेको श्रीमतीबाहेक परिवारका अन्य सदस्यले थाहा पाउँदैनन् ।
उमेरले पचास पुग्न लागेका सन्तोषले तिजको व्रत बस्न थालेको चार वर्ष जति भयो । उनको श्रीमतीलाई छारे रोगले गाँजेपछि उनले व्रत बस्न थालेका हुन् । घरमा दाजुका परिवार पनि छन् । भाउजू दाजुका लागि व्रत बस्छिन्, उनी भने श्रीमतीका लागि व्रत बस्छन् तर गुपचुप ।
लुकीलुकी किन व्रत बस्नुप¥यो त ?
यस्तो हुँदाहुँदै व्रत चैँ किन बस्नुप¥यो त भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘मेरो जीवनभर साथ दिन्छु भनेर आएकी श्रीमतीको स्वास्थ्यको कामना गर्न मन लाग्यो ।’
तस्विर : कृष्षा श्रेष्ठ
कभर माेडल : सनम कठायत र अञ्जली अधिकारी
लाेकेशन ः नागरिक नेटवर्क स्टुडियाे